Acropolis, kedu ihe ọ bụ na nke kachasị ama n'ụwa | Njem akụkọ
Acropolis, kedu ihe ọ bụ
Louis Martinez | 07/04/2022 15:00 | omenala, Greece
Anyị niile nụrụ banyere Acropolis nke Atenas. Anyị agụwodị ya ma leta ya. Ma, ị nọ na-eche ihe mere o ji dịrị na gịnị bụ ọrụ ya. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara a acropolis, kedu ihe ọ bụ Ndien nso udeme ke enye ekenyene ke eset? Mgbe ahụ, anyị ga-agwa gị banyere ụfọdụ ndị a ma ama.
Acropolis Ọ pụtara "obodo n'elu" na Grik. Ma, n’ezie, ọ bụ ógbè ndị kasị elu nke obodo ndị Gris. Ndị bi n'oge ochie biri n'akụkụ ndị ahụ dị elu na ndị mkpọda iji chebe onwe ha nke ọma pụọ ​​na mwakpo ndị iro. Ka oge na-aga, obodo gbasapụrụ n'ebe ndị dị ala. Ma ndị bi na ya na-edebe acropolis iji gbaba n'oge agha megide ndị ọzọ uwe ojii ndị agbata obi N'aka nke ya, n'ihi ọnọdụ ha nwere ihe ùgwù na afọ ndụ ha, ha nwetara ụlọ ụlọ ndị kacha akara ngosi ọ bụkwa ebe a na-enwe nzukọ dị mkpa. Ozugbo a kọwapụtara ihe niile gbasara acropolis, ihe ọ bụ na ihe eji eme ya, anyị ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha mkpa.
1 Acropolis nke Atens
1.1 Onye Parthenon
1.2 Erechtheion nke Acropolis
1.3 Ihe owuwu ndị ọzọ nke Acropolis nke Athens
2 Acropolis nke Kọrịnt
4 Acropolis nke Pergamon
Acropolis nke Atens
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nke a kasị mara amara n'ụwa. Kwa afọ na-eleta ya ọtụtụ nde ndị njem nleta bụ́ ndị na-alọta na-enwe mmasị na ebube ya. N'ihe banyere ya, ọ bụ n'elu ugwu dị otu narị mita na iri ise. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na a na-akpọkwa ya Crecopy, n'ịsọpụrụ eze Atens mbụ: onye a ma ama bụ agwọ-nwoke Crecope.
N'ihi na mmalite nke Acropolis nke Athens bụ oge ochie. N'ezie, a maara, site na foduru achọtara, na e nwere oge ochie mycenaean na narị afọ nke abụọ tupu Kraịst na ihe ochie ọzọ, ihe dị ka, na narị afọ nke isii tupu oge anyị. Otú ọ dị, nke anyị maara taa bụ nke oge gboo ogbo nke ndị Hellenic mmepeanya. Dabere na ndị gara aga, e wughachiri ya Pericles (495-429 BC), onye nyefere ndị na-ese ihe dị mkpa dị ka nnukwu ihe owuwu ya Phidias, Onye kere ihe ọkpụkpụ nke Parthenon a ma ama. Na nke a na-eduga anyị na-ekwu banyere ya kasị emblematic ewu.
Parthenon ama ama na Acropolis nke Athens
Anyị ka malitere na nnukwu ọrụ a. Ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Callicrates e Ictinus, nke nwere ike jiri ntọala nke ụlọ nsọ ochie a na-akpọ Hecatompedon. Ọ na-ewe ebe dị ihe dị ka iri asaa na iri atọ na mita ma gbaa ya gburugburu ka ogidi karịrị iri dị elu. Ọzọkwa, ọ bụ na plinth na-enweta site nzọụkwụ atọ.
N'ime, a na-ekewa ya n'ime ụlọ abụọ nọọrọ onwe ha. Ebe ọwụwa anyanwụ ka ibu na kọlụm Doric siri ike kewapụrụ eriri mmiri atọ ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ ya bụ ụlọ ahụ a ma ama ọkpụkpụ athena mere site Phidias na ọla-edo na ọdu. N'akụkụ nke ya, ọdịda anyanwụ nwere ogidi Ionic ma bụrụ nke a kara aka na-edebe akụ nke chi nwanyị. Agbanyeghị, ụlọ nsọ ahụ na-abụkarị Doric, n'agbanyeghị na enwere otu ihe izizi pụtara ìhè.
Anyị na-agwa gị gbasara ezigbo frieze nke dị na mgbidi ụgbọ mmiri ahụ. Ruo mgbe ahụ, ọ dịghị ụlọ Doric ejirila ebe ahụ tinye ya. N'ọnọdụ ọ bụla, frieze bụ otu n'ime ọmarịcha ọmarịcha Phidias. N'akụkụ ya otu narị mita na iri isii n'ogologo, ọ kpụrụ ngụkọta nke mmadụ 378 na anụmanụ 245 na mabul.
Erechtheion nke Acropolis
Ya na tribune a ma ama (ma ọ bụ stoa) nke isii ji ihe oyiyi caryatids, bụ ụlọ ọzọ a kacha mara amara na Acropolis. Ọ bụ ụlọ nsọ a raara nye chi Poseidon y Athena, ma nyekwa eze akụkọ ifo nke Atens erectus, ya mere aha ya.
A na-ekwu na ụlọ ahụ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Menesicles, onye gbasoro iwu Ionic iji wuo ya na marble site n’Ugwu Pentelico. E bu n’obi ka e were ụfọdụ n’ime ihe ndị kasị baa uru maka ndị Atens. N'ime ha, ndị Palladium, ihe oyiyi osisi Athena nke, dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, si na mbara igwe daa. E likwara ndị eze n’ebe ahụ Crecope na nke ya erectus. Ọbụna ada nke ikpeazụ, PandrosusO nwere ụlọ ekpere.
Ihe owuwu ndị ọzọ nke Acropolis nke Athens
Templelọ nke Athena Nike
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị mkpa ụlọ na Acropolis, malite na Propylaea, nke, na nnukwu ogidi Doric isii ya, kpụrụ ọnụ ụzọ nke ogige ahụ. I kwesịkwara ịga na Temple nke Athena Nike, ọrụ nke Callicrates yana frieze ya raara nye agha ahụike; nke ebe nsọ nke Artemis Bauronia, na ya iri atọ na asatọ mita ogologo gallery nke housed a ọla mmeputakwa nke Anyịnya Troy, na nnukwu portico nke eumenes, nke e wuru na narị afọ nke abụọ BC.
Ma, n'elu ihe niile, ọ pụta ìhè na Ụlọ ihe nkiri nke dionysus, a na-ewere dị ka ndị kasị ochie n'ụwa. O nwere ọkwa iri asaa na asatọ site n'ụzọ okirikiri na ebe ngosi nka maka ndị ọchịchị kewapụrụ ya. N'ihu ha bụ ìgwè ndị egwú na, n'ihu, proscenium, ogologo ikpo okwu ebe ndị na-eme ihe nkiri na-arụ ọrụ n'ezie. N'ikpeazụ, ihe ahụ mere n'azụ, bụ́ nke ruru anyị n'azụ. Ndị na-ede egwuregwu Grik ukwu, si osa elu Aristophanes, na-agafe Nkwado y Euripides.
Acropolis nke Kọrịnt
Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka nke dị na Atens, ọ dịkwa ezigbo mkpa n'oge ochie. Ọ bụ otu n'ime acropolises kasị ukwuu na Gris. Mmalite ya laghachiri na njedebe nke narị afọ nke asaa tupu Kraịst, a na-ahụkwa ya ka ọ na-achị obodo ahụ site n'ugwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita isii. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime ihe ị ga-ahụ na ya esiteghị n'oge Grik ma ọ bụ ndị Rom, kama ọ bụ n'oge emepechabeghị anya.
Otú ọ dị, ntọala na-anọgide ụlọ nsọ nke aphrodite, ụlọ kachasị mkpa na mgbagwoju anya. N'ime ya, e nwere ihe oyiyi chi nwanyị na ndị ọzọ Eros y Helios, Onye nche ikpeazụ a nke Kọrịnt. Kama, ọ tụfuru kpamkpam Sisypheus, a tholos ma ọ bụ ihe ncheta ọkara okirikiri nke elere anya Zeus ee Ares.
Ma a chọtala ya isi iyi nke Pyrenees, ọ bụ ezie na n'okpuru ebe nchekwa ndị Rom. O doro anya na n'akụkụ ya bụ ihe oyiyi nke chi Apollo na, dị ka akụkọ mgbe ochie, ọ bụ ebe a ka Bellerophon jisiri ike zụọ ịnyịnya Pegasus.
Aso Acropolis Ụlọ ihe nkiri
Mgbe ndị na-eme nchọpụta malitere ịmụ banyere ọrụ akụkọ ihe mere eme nke acropolis, ihe ọ bụ na ihe eji eme ya, n'oge na-adịghị anya, ha ghọtara na ọ dị nnukwu mkpa n'ime atụmatụ obodo obodo. Omuma Gris. A pụkwara ịhụ nke a na acropolis nke Aso, obodo nke nwere ugbu a Turkey, ma nke ahụ, n'oge ochie, bụ Helena.
N'ụzọ doro anya, e hiwere ya na narị afọ nke asaa tupu Kraịst, ma, na nke a, site Aeolian biri site na. Mytilene. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta ihe ochie n'Ebe Ugwu America gwupụtaghị ya ruo ọgwụgwụ nke narị afọ nke XNUMX. Joseph Thacher y Francis H Bacon. Ndị a were ọtụtụ n'ime iberibe achọtara na Ụlọ ihe ngosi nka nke Fine Arts, Boston. Otú ọ dị, ị nwere ike ịhụ ndị ọzọ na Louvre na na Ebe A Na-edebe Ihe Ochie nke Istanbul.
Ma, ịlaghachi na acropolis nke Asos, ị ka nwere ike ịga na foduru nke temple nke athena, na ụdị Doric ya, mgbidi oge ochie, necropolis, mgbatị ahụ na ihe nkiri Rom. Ị nwekwara ike ịga na agora, onye nwere a stoa ma ọ bụ tribune na ogidi, na boleuterion. Nke ikpeazụ bụ ebe ndị isi obodo na-ezukọ iji kpebie okwu ọha na eze dị mkpa. Ya mere, ọ ga-abụ ihe yiri nke ugbu a nzuko nke ndị nnọchiteanya, ebe ha bụ obodo-steeti.
Acropolis nke Pergamon
Ọzọkwa a oge ochie obodo Greek taa bụ nke Turkey. Na, n'otu aka ahụ, n'ime ya ị nwere ike ịhụ acropolis dị mkpa, nke mere na ọ dị Ihe Nketa Uwa. Central axis bụ Ụlọ nsọ Athena Nikephoros, wuru na-eso akwụkwọ iwu Doric. N'akụkụ ya bụ Biblioteca, nke, n'oge ya, bụ nke abụọ kasị ukwuu na ụwa a maara mgbe nke Aleksandria. Ma, n'ebe ugwu, bụ Obí eze n'akụkụ ụlọ agha na ogige.
Kama, n'ebe ndịda bụ ebe ịchụàjà nke zeus nke, n'enweghị mgbagha, bụ ihe ncheta dị egwu. Ọ dị mita 36 n'ogologo na 34 n'obosara ma jiri nnukwu steepụ nweta ya. Tụkwasị na nke ahụ, ogidi ndị siri ike kwadoro ụlọ elu, nke a na-achọ mma na frieze nke na-anọchi anya ọgụ dị n'etiti chi na ndị dike.
N'otu aka ahụ, acropolis nke Pagamọn nwere nnukwu ihe Teatro O nwere puku mmadụ iri. N'ebe dị elu nke mita 38, o nwere ahịrị oche iri isii na asatọ. Na, n'akụkụ ala ya, ọ jikọtara ya na mbara ala dị egwu nke e ji aga ije.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghịzi nke acropolis, ọ bụrụ na ị gaa na ya, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Asclepion, nke dị ihe dị ka kilomita anọ site n’obodo ahụ. Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ụlọ nsọ a raara nye chi nke ọgwụ (Asclepius). N'ihi nke a, ndị ọkà mmụta nke ọzụzụ a zukọrọ n'ebe ahụ, gụnyere ndị a ma ama Galen. Na mgbakwunye, dị nso na e nwere obere ụlọ nsọ ọzọ a raara nye Telesforo, ịdị ọcha y Panacea, ụmụ Asclepius na obere chi ọgwụ.
N'ikpeazụ, anyị kọwara ihe niile gbasara acropolis, kedu ihe ọ bụ na ihe eji ya. Mana anyị egosila gị ụfọdụ ihe kacha mkpa nke Antiquity ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga leta ha. Agbanyeghị, anyị ga-agwa gị na, site na mgbakwunye, a na-akpọ otu ụlọ ochie ọ bụla nke dị n'akụkụ elu nke obodo mgbe ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị nke Bratislava, Edinburgh o Constantinople. The Itie nke oge ewerewo ya toll na acropolis, obodo ukwu masterpieces, ma ha ka bụ kpokọtara ebe. Amaja ịga na ha na ị ga-achọpụta ihe kpatara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Acropolis, kedu ihe ọ bụ
Ihe ị ga-ahụ na Bulgaria
Ihe ị ga-ahụ na Elche